GTranslate: Plugin fandikana WordPress tsotra mampiasa Google Translate | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 2, 2020 Alakamisy 18 martsa 2021 Douglas Karr
Taloha, nisalasala aho tamin'ny fampiasana a fandikan-teny amin'ny milina an'ny tranokalako. Te hanana mpandika teny eraky ny planeta aho hanampy amin'ny fandikana ny tranokalako ho an'ny mpihaino isan-karazany, saingy tsy misy fomba tsotra hamaliako ireo sarany ireo.
Izany dia nilaza fa tsikaritro fa ny atin'ny tranokalako dia zaraina iraisampirenena - ary olona maro no mampiasa Dikanteny Google hamaky ny atiny amin'ny fitenin-drazako. Izany no mahatonga ahy hanana fanantenana fa mety ho ampy tsara ilay dikanteny ankehitriny satria manohy manatsara ny fampiasana ny milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy i Google.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia te-hanampy plugin iray aho izay nanolotra fandikan-teny amin'ny alàlan'ny Google Translate, fa kosa mila zavatra feno kokoa noho ny dropdown nandika ilay tranonkala aho. Tiako ny motera fikarohana mba hahita sy hanondro ny atiny iraisam-pirenena izay mila fampiasa roa:
Metadata - rehefa mandady ny tranokalako ny motera fikarohana dia tiako izany hreflang tag amin'ny lohako mba hanomezana motera fikarohana ireo lalan'ny URL isan-karazany amin'ny fiteny tsirairay.
URL - ao anatin'ny WordPress, tiako ny permalinks hampiditra ny fiteny fandikan-teny amin'ilay lalana.
Ny antenaiko, mazava ho azy, dia ny hanokatra ny tranokalako ho an'ny mpihaino marobe kokoa ary misy ny tambiny azo antoka amin'ny fampiasam-bola satria afaka mampitombo ny fidiram-bolako sy ny dokam-barotra aho - tsy mila ny ezaka fandikan-teny.
Ny plugin GTranslate sy ny serivisy miaraka aminy dia mampiditra ireo fiasa rehetra ireo ary koa safidy hafa maro:
Dashboard - Drafitra serivisy feno ho an'ny fikirakirana sy ny fanaovana tatitra.
Fandikana ny milina - Fandikan-teny mandeha ho azy Google sy Bing.
Search Engine Indexing - Hanondro ireo pejinao voadika ny motera fikarohana. Ho hitan'ny olona ny vokatra amidinao amin'ny fikarohana amin'ny fitenin-drazany.
URL milamina amin'ny motera fikarohana - Manaova URL na Subdomain misaraka isaky ny fiteny. Ohatra: https://fr.martech.zone/.
Fandikana URL - Ny URL an'ny tranokalanao dia azo adika izay tena zava-dehibe amin'ny SEO amin'ny fiteny maro. Afaka manova ireo URL voadika ianao. Azonao atao ny mampiasa ny sehatra GTranslate hamantarana ny URL voadika.
Fanovana ny fandikan-teny - Amboary amin'ny tanana ny fandikan-teny miaraka amin'ny mpamoaka tsipika GTranslate mivantana avy amin'ny teny manodidina. Ilaina amin'ny zavatra sasany ity… ohatra, tsy tiako ny anaran'ny orinasa, Highbridge, nadika.
Fanovana an-tsipika - Azonao atao koa ny mampiasa syntax ao anatin'ny lahatsoratrao hanoloana rohy na sary miorina amin'ny fiteny iray.
Ny syntax dia mitovy amin'ny sary:
Ary raha tsy tianao ny faritra voadika, dia azonao atao ny manampy kilasy iray fotsiny tsy adika.
Antontan'isa momba ny fampiasana - Azonao atao ny mahita ny fifamoivoizan'ny fandikan-teninao sy ny isan'ny fandikan-teny amin'ny tabilao misy anao.
Subdomains - Azonao atao ny misafidy hanana subdomain ho an'ny fiteninao tsirairay avy. Nisafidy an'io lalana io aho fa tsy ny làlan'ny URL satria tsy dia nandoa haba tamin'ny tranokalaniko. Haingana be ny fomba subdomain ary manondro mivantana fotsiny ilay pejy voatahiry cache, voadika ny Gtranslate.
Domain - Azonao atao ny manana sehatra iray misaraka amin'ny fiteny tsirairay. Ohatra, raha nampiasa domain .fr avo lenta (tld), mety ho ambony noho ny valin'ny motera fikarohana any Frantsa ny tranokalanao.
mpiara-miasa - Raha tianao ny olona hanampy amin'ny fandikan-teny dia afaka mahazo miditra amin'ny GTranslate izy ireo ary manampy fanovana amin'ny tanana.
Hanova ny tantara - Jereo sy amboary ny tantaranao fanovana amin'ny tanana.
Vaovao farany mirindra - Tsy ilaina ny manamarina ny fanavaozana ny rindrambaiko sy mametraka azy ireo. Miahy ireo fanavaozana hafa izahay. Ankafizinao fotsiny ny fanompoana vaovao farany isan'andro
fiteny - Afrikaans, Albanian, Amharic, Arab, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danemark, Dutch, English Esperanto, estonianina, filipiana, finlandey, frantsay, frisian, galisiana, georgien, alemanina, grika, gujarati, haitian, hausa, hawaiianina, hebreo, Hindi, Hmong, hongariana, Islandey, Igbo, indonezianina, irlanda, italianina, japoney, java Kannada, Kazakh, Khmer, Koreana, Kiorda, Kyrgyz, Lao, Latina, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malayalam, Malay, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norveziana, Pashto, Persiana, poloney, portogey, Punjabi, romana, rosiana, serba, shona, sesotho, Sindhi, sinhala, Slovak, Slovenian, samoa, skotika gaelic, somali, espaniola, Sundana, Swahili, soedoà, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish , Okrainiana, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu
Midira amin'ny fanandramana mandritra ny 15 andro GTranslate
GTranslate sy Analytics
Raha mampiasa ny làlan'ny URL an'ny GTranslate ianao dia tsy hahita olana amin'ny fanarahana ny fivezivezenao. Na izany aza, raha miasa avy amin'ny subdomain ianao dia mila manamboatra araka ny tokony ho izy ny Google Analytics (sy ny Google Tag Manager raha mampiasa azy ianao) hisamborana izany fifamoivoizana izany. Misy a lahatsoratra mahafinaritra amin'ny antsipiriany momba ity fananganana ity ka tsy averiko eto izany.
Ao anatin'ny Google Analytics, raha te hizara ny analytics ianao amin'ny fiteny dia afaka manao izany ampio ny anaran'ny mpampiantrano ho refy faharoa hanivanana ny fivezivezenao amin'ny alàlan'ny subdomain.
Fambara: mpiara-miasa amiko aho GTranslate.
Tags: bing mandikagoogle translatehreflangfandikan-teny amin'ny milinafandikan-tenyWordPressplugin WordPressfandikana wordpressplugin amin'ny fandikana wordpress